စကားကွီး (၄) ခှနျးမပေါကျကွားစနေဲ့.. - YATHAZONE
By : Zin Zin
ရှေးတုန်းကတိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာမင်းလုပ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးဟာ တစ်နေ့ မှာသူဆင်းရဲတစ်ယောက် အယောင်ဆောင်ရုပ် ဖျက်ပြီး တိုင်းပြည် အခြေအနေလေ့လာဖို့ မင်းနေပြည် က တိတ်တဆိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူ ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာက အလွန် ဆင်းရဲတဲ့ အဖိုးအို လင်မယား နေတဲ့တဲအိမ်အ စုတ်ကလေးဆီကိုပါ။
အဖိုးအိုလင်မယားဟာပင်ပမ်းဆင်းရဲစွာနဲ့ ယာခင်းထဲမှာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် စားသောက် နေရတာအယောင်ဆောင်ဘုရင်ကြီးတွေ့ရပါ တယ် ။ဒီမှာတစ်ညအိပ် တည်းဖို့ခွင့်တောင်း တော့ အဖိုးအို လင်မယား ကခွင့်ပြု ပြီးလိုလေး မရှိအောင်လဲရှိတာလေးနဲ့ဧည့်ခံကျွေးမွေးကြ ပါတယ်။
ဒီအခါအဖိုးအိုကဒီလိုပြန်ပြီး ပြောပါတယ်… “အမောင်ပြောတာဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့်သားသမီးဆိုတာလဲသူ့မီးနဲ့ သူ့အပူ ဖြစ်နေကြတာကလား.. ကျုပ်တို့မှာလဲကိုယ် စားဘို့တင်မကခိုးမှူးကြီးလဲ ပေးရသေးတယ် အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုလဲကျွေးရတယ်..သမုဒ္ဒ ရာထဲလဲပစ်ချ နေရသေးတယ်ရန်သူကိုလဲ ရှာ ဖွေကျွေးမွေးနေရပါတယ် ” အဖိုးအိုစကားကဘုရင်ကြီးအတွက်ထူးဆန်း နေပါတယ်။
”“ဘုရင်ကိုဘာလို့ခိုးမှူးးကြီးဆိုရပါသလဲအဖိုး”“ကျွန်ုပ်တို့တွေနဖူးက ချွေးခြေမကျအောင်ရှာ ဖွေထားရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူခိုးဓားပြလက်မပါရအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ ခိုးသူတို့ရဲ့အ ကြီးအမှူး လို့ဆိုလိုတာပါ ” ဘုရင်ကြီးဟာ အဖိုးအိုရဲ့အဖြေကို သဘော ကျ သွားပါတယ်။
ဒါနဲ့နောက်ထပ်စကားတစ် ခွန်းကိုထပ်မေးပြန်ပါတယ်။ “အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေး ရတယ်ဆို တာကရော ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်ဗျာ ”“လောကမယ်မိဘကကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ တကယ်တော့ဧည့် သည်တွေပါပဲအမောင်..အချိန်တန်အရွယ် ရောက်တဲ့အခါသူတို့လမ်း သူတို့လျှောက်ကြ တာပဲ မဟုတ်လား ဒါကြောင့်သူတို့ကို အာ ဂန္တု့လို့ဆိုရတာပါမောင် ” ဒီစကားကိုလဲဘုရင်ကြီးသဘောကျ ပြန်ပါ တယ်။
နောက်ထပ်စကားအဓိ ပ္ပါယ် ကိုလဲထပ် မေးလိုက်ပြန်တယ်..“သမုဒ္ဒရာ ထဲလဲချ ရတယ်ဆိုတာကရောဘာ အဓိပ္ပါယ်ပါလဲအဖိုး ”“ဒါကဒီလိုပါ..ချောင်းမြစ်အသွယ် သွယ်တို့ ကလာတဲ့ရေမှန်သမျှ ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ထဲစီးဝင်ကြပေမဲ့ပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိသလိုဘဲတ နေ့တနေ့ကျုပ်တို့စားသမျှ အားလုံးဝမ်းခေါင်း ထဲမှာပြည့်တယ်လို့ မရှိတာအမောင်အသိပဲ မဟုတ်လား..
“စိတ်တူကိုယ်တူဆိုပြီး ကိုယ်ကချစ်ခင်ပေါင်း သင်းနေပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသက်စည်းစိမ်ကို အ များဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်ချေရှိတာဒီဇနီးမယားပါပဲ အမောင်..ဒီစကားကတော့အရေးကြုံ လာတဲ့ အခါမှအမောင်သိပါလိမ့်မယ်.. အခုကတော့ ရန်သူကိုလဲရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေတယ်ပဲ မှတ် သားလိုက်ပါအမောင် ”နောက်ဆုံးစကားကိုဘဝင်မကျ ပေမယ့်မှတ် သားလောက်စရာ မို့လက်ခံလိုက်ပြီး သူဟာ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တော့ အဖိုး အိုလင်မယားဟာ ပြူးပြူးပျာပျာ ဖြစ်သွားပါ တော့တယ်..။
“မကြောက်ကြပါနဲ့အဖိုး..တစ်ခုတော့ပြောပါ ရစေအခုအဖိုးပြောတဲ့ စကားကြီးလေးခွန်းကို တော့ဘယ်သူကိုမှမပြောမိစေဖို့မှာခဲ့ပါရစေ.. တကယ်လို့ပေါက်ကြားခဲ့ရင်သေဒဏ်သင့်မှာ ကိုသဘော ပေါက်စေချ င်တယ်..”“မပေါက်ကြားစေဖို့ ဂတိပေးပါတယ်မင်းကြီး”ဤသို့ဖြင့်ဘုရင်ကြီးလဲ နန်းတွင်းပြန်သွားပြီး နောက်တစ်နေ့ညီလာခံတွင် အဖိုးအိုပြောဆို ခဲ့သောစကားကြီးလေးခွန်းကိုမှူးးမတ်တွေကို ပြောဆိုမေးခွန်းထုတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကိုမေးမြန်း ပါတော့တယ် ။
မှူးမတ်တွေအားလုံးမဖြေဆို နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ဘုရင်ကြီးက ဖြေဆိုဖို့အ ချိန် ခုနစ်ရက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။မှူးမတ်တွေအားလုံး အကြပ်ရိုက်နေချိန်မှာ လူလည်အမတ်တစ်ယောက်ကတော့ဘုရင် ကြီး ခရီးထွက်ပြီးပြန်လာမှ ဒီစကားလေးခွန်း ကိုမေးတာဆိုတော့အကြောင်းရရှိရမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ဘုရင်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်း ကိုစုံစမ်းပြီး ရှာဖွေရာက အဖိုးအိုလင်မယားရှိ ရာကို ရောက်သွားပါတော့တယ် ။
အမတ်လူ လည်ဟာ အဖိုးအိုကို တံစိုးလက်ဆောင်ပေး ပြီးစကားလေးခွန်းကို မေးပေမယ့်အဖိုးအိုဟာ လုံးဝမပြောပါဘူး။နောက်ဆုံးအဖိုးအိုရဲ့ ဇနီးဖွားအိုကိုအသပြာ ငွေ ၁၀၀၀ ပေးပြီးမေးတဲ့အခါ ဖွားအိုကငွေကို ယူပြီးစကားလေးခွန်း အဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဟပြော ကြားလိုက်ပါတယ် ။ဒါနဲ့ရက် ချိန်းခုနစ်ရက်ပြည့်လို့ ညီလာခံပြန်ဝင် တဲ့အခါ ဘုရင်ကြီးကိုဘယ်သူမှ အဖြေမပေး နိုင်ကြပေမယ့် လူလည်အမတ်ကတော့ ခပ် ကြွားကြွားလေးဖြေနိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘုရင်ကြီးက သူ့အစွမ်းအစနဲ့ဖြေ နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသိနေတော့ မှန်မှန်မပြော သေဒဏ်ပေးမယ်. ဘယ် လိုသိလာတာလဲဆို တာမှန်မှန်ပြောဆိုပြီး အကြပ်ကိုင်မေးတော့မှ အဖိုးအိုလင်မယားဆီက သိလာတာလို့အမှန် အတိုင်းပြောပါတော့တယ်။
“အကောငျးမွငျတတျသူ” ရှေးရှေးတုနျးကပေါ့.. မကျြလုံးတဈဖကျကနျးပွီး .. ခွတေဈခြောငျး မရှိတဲ့ .. သူဋ်ဌေးကွီးတဈယောကျ ရှိသတဲ့။ တဈနမှေ့ာ သူဋ်ဌေးကွီးဟာ .. အတျောဆုံးပနျးခြီဆရာတှကေို ချေါပွီး .. သူ့ရဲ့ပုံတူ ပနျးခြီကားကို အလှဆုံးနဲ့ .. အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ .. ရေးဆှဲဖို့ ပွောသတဲ့။ ပနျးခြီဆရာတှလေညျး .. မကျြစိတဈဖကျလပျ.. ခွတေဈခြောငျးမရှိတဲ့သူရဲ့ပုံတူကို.. အလှဆုံးဖွဈအောငျ ရှေးဆှဲဖို့ဆိုတော့ .. လကျတှနျ့ နှုတျဆိတျနကွေတာပေါ့…။ အဲဒီမှာပဲ ပနျးခြီဆရာတဈယောကျဟာ .. သူဋ်ဌေးကွီးရဲ့ပုံတူပနျးခြီကားကို .. အလှဆုံး ၊ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ.. ရှေးဆှဲဖို့ ကတိပွုလိုကျပါသတဲ့…။ ပွီးတော့ ပနျးခြီဆရာ ဟာ .. ပုံတူပနျးခြီကားကို .. စတငျ ရေးဆှဲပါတော့တယျ။ …
သူတို့ မငျးအနားက ထှကျသှားလို့ တဈယောကျထဲကနျြခဲ့ရတယျဆိုပွီး ဝမျးနညျးနတောလား သူတို့အနားမှာရှိ့တော့ရော မငျးအပျေါမှာ မငျး ကောငျးပေးသလောကျ သူတို့ပွနျကောငျးပေးခဲ့လို့လား မငျးအပျေါမကောငျးတဲ့သူတှနေဲ့ အ တူ နေ ရ တာ နဲ့ စာ ရငျ တဈယောကျထဲနရေတာက ပိုပွီးလှတျလပျတယျ.” သူတို့ မငျးကို မခဈြတော့လို့ ခံစားနရေတာလား တျောစမျးပါကှာ… အခဈြက ဘဝမဟုတျဘူး ။ သူတို့ ပါးစပျက ခဈြပါတယျဆိုတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးကွားရဖို့အရေး မငျးဘဝမှာ ဘာတှဘေယျလောကျထိ့ ပေးဆပျခဲ့ရပွီးပွီလဲ….. မွဲမွဲ မှတျထားပါ လူတခြို့ဟာ…. မငျးကိုအသုံးခလြို့ဝသှားပွီးဆိုရငျ မငျးကဘဲ သူတို့အပျေါမှာ အမှားကွီးကြူးလှနျခဲ့သလိုမြိုးပုံစံတှနေဲ့ မငျးအနားကတဖွေးဖွေး ထှကျခှာသှ့ားကွလိမျ့မယျ…. စဉျးစားပါ….? တဈကွိမျလောကျ ပြျောရှငျရဖို့အရေး အကွိမျတရာမက ငိုကွှေးပေးခဲ့ရတာတှေ …
စီးပှားရေးလုပျတဲ့အခါ မုဆိုးတဈဦးလို ကငျြ့ကွံပါ
စီးပှားရေးလုပျတဲ့အခါ မုဆိုးတဈဦးလို ကငျြ့ကွံပါ တဈခါက စီးပှားရေးလုပျရတာ အဆငျမပွလေို့ စိတျညဈနတေဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျရှိတယျ။ ထိုစိတျညဈမှုတှကေို ဖွဖွေောကျဖို့ သူ့အိမျရဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ တောအုပျလေးနားက စမျးခြောငျးလေးဘေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး စိတျဖွရေငျး နညျးလမျးသဈတှကေို စဉျးစားနခေဲ့တယျ။ အဲ့လိုနစေ့ဉျ ထိုငျစဉျးစားနခေဲ့တဲ့ နရေ့ကျတိုငျးမှာ သူ့နံဘေးကနေ မုဆိုးကွီးတဈဦးက တောကောငျတှေ တဈနတေ့ဈမြိုး ရ,ရလာကာ ဖွတျသှားလရှေိ့တာကို သတိထားမိတယျ။ ဒါနဲ့တဈရကျတော့ ဗဟုသုတလညျးရအောငျဆိုကာ မုဆိုးကွီးကို သားကောငျတှေ တဈနတေ့ဈမြိုး ဘယျလိုရအောငျလုပျလဲ မေးကွညျ့ခဲ့တယျ။ မုဆိုးကွီးကလညျး အသကျဝါကွီးသူဆိုတော့ ‌လူ့လောကရဲ့ အတှအေ့ကွုံမြား အတျောအသငျ့ရှိနခေဲ့ပွီ။ ဒါကွောငျ့ လူငယျလေး စကားပွောတဲ့အခါမှာ “ငါလညျး မငျးကို သတိထားမိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီနရောမှာ လာလာပွီး ထိုငျနတောလဲလို့” …
This Year : 9627
Total Users : 262429
Total views : 715588